एनएमबी बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ३ भदौ २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी एनएमबी बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ३ भदौ २०७५)
on: ३ भाद्र २०७५, आईतवार १०:५५ लगानी
एनएमबी बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, ३ भदौ २०७५)
एनएमबी बैङ्कले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक साधारणसभा असार ३१ गते बिहीवार सम्पन्न गरेको छ । उक्त सभाले १५ प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव ७८९५ प्रतिशत नगद लाभांशको प्रस्ताव पारित गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिम चुक्तापूँजी पुर्‍याउन एफपीओको सहारा लिएको कम्पनीले एफपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया विविध कारण लम्बिएकाले साधारणसभा गर्न ढिलाइ भएको बताएको थियो । बैङ्कले एफपीओ र १५ प्रतिशत बोनस शेयर पूँजीकृत गरी निर्धारित चुक्तापूँजी पुर्‍याएको जानकारी दिएको छ ।
गत आवको चौथो त्रैमाससम्ममा बैङ्कको चुक्तापूँजी रू. ७ अर्ब ६० करोड ३१ लाख ९१ हजार रहेको छ । बोनस शेयर बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ८ अर्ब ७४ करोड ३७ लाख ८५ हजार पुग्नेछ । बैङ्कको जगेडा कोष रकम रू. ८ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा जगेडा रकम करीब १ सय ६ प्रतिशत बढी हो ।
एफपीओपछि बैङ्कको पूँजीगत आधार बलियो भई जगेडा कोषको रकमसमेत मजबूत बनेको छ । यसले भविष्यमा बोनस शेयर वितरण र व्यवसाय विस्तारमा टेवा पुग्ने बैङ्कको विश्वास छ । गत आवको चौथो त्रैमासमा बैङ्कले रू. १ अर्ब ८१ करोड २९ लाख ६६ हजार नाफा आर्जन गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा साढे २३ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीले गत आवमा अघिल्लो आवको तुलनामा नाफा १६ प्रतिशत बढाएर रू. २ अर्ब २९ करोड ८५ लाख ७२ हजार आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको भन्दा १ सय २४ प्रतिशत बढी (रू. ३७ करोड ४० लाख ७४ हजार) खराब कर्जा उठाएको कम्पनीले निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ६८ प्रतिशतबाट शून्य दशमलव ८८ प्रतिशतमा झरेको छ । सम्भावित जोखीमबापतको व्यवस्थामा अघिल्लो आवको भन्दा १० प्रतिशत कम अर्थात रू. १६ करोड ७७ लाख ५२ हजार छुट्ट्याएको छ । खराब कर्जा सङ्कलनमा वृद्धि हुनुका साथै सम्भावित जोखीमका लागि कम रकम छुट्ट्याएकाले बैङ्कको नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो । बैङ्क ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढेको छ ।
बैङ्कले सार्वजनिक गरेको गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दा :
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा बैङ्कले रू. ८४ अर्ब ५० करोड ७१ लाख ३६ हजार निक्षेप सङ्कलनका साथै रू. ७५ अर्ब ६४ करोड ५९ लाख १७ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवको तुलनामा निक्षेप १५ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह करीब २१ प्रतिशत बढाएको हो ।
चौथो त्रैमासमा बैङ्कले अघिल्लो आवको भन्दा २८ प्रतिशत बढी रू. १३ अर्ब ६२ करोड २९ लाख ७३ हजार लगानी गरेको छ । यस अवधिमा बैङ्कले वैदेशिक मुद्रा विनिमयबाट रू. ३० करोड ६५ लाख ३२ हजार आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो आवको भन्दा ४७ प्रतिशत बढी हो ।
चौथो त्रैमासमा रू. ८ अर्ब ७९ करोड ७३ लाख ४७ हजार ब्याज आम्दानी गरेको बैङ्कले ब्याजमा रू. ५ अर्ब ८२ करोड ४६ लाख ८६ हजार खर्र्चिएको छ । ब्याज आम्दानी ४४ प्रतिशत बढेको कम्पनीको ब्याज खर्च करीब ४५ प्रतिशत बढेको हो ।
कर्मचारी खर्च शीर्षकमा बैङ्कले रू. ८१ करोड ३३ लाख ५० हजार खर्र्चिएको छ ।
स्थिर सम्पत्ति रू. १ अर्ब ५८ करोड १६ लाख २४ हजार र अन्य सम्पत्ति रू. ५ अर्ब ७१ करोड ११ लाख ७ हजार रहेको छ । अन्य सम्पत्ति अघिल्लो आवको भन्दा ६ गुणा बढेको देखिएको छ भने स्थिर सम्पत्ति ८ प्रतिशत बढेको छ ।
बैङ्कले सार्वजनिक गरेको गत आवको चौथोे त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशेयर आम्दानी वार्षिक रू. २८ दशमलव शून्य ४ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २ सय १४ दशमलव ४० छ । कम्पनीको बिहीवारको कारोबारमा अन्तिम मूल्य रू. ३ सय ३२ कायम भएको छ । यस दिन बैङ्कको १ सय २७ पटकको व्यापारमा ५१ हजार ३ सय ४१ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।
मैनबत्ती विश्लेषण : बैङ्ककोे ६४ दिनको करोबार अवधिमा अन्तिम दिन ह्यामर आकृति भएको मैनबत्ती बनेको छ । यस्तो आकृतिले बैङ्कको शेयरमूल्य आगामी दिन बढ्ने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआई : बैङ्कको ६४ दिनको कारोबारमा आरएसआई न्युट्रल जोन (४६ दशमलव ०८ स्केल)मा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन : बैङ्ककोे ६४ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन ८ दशमलव ८६ बिन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको छ ।
मुभिङ एभरेज : बैङ्कको ६४ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य रेखा १४ दिने औसत मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्यरेखाको बीचमा छ । बिहीवारकोे शेयरमूल्य रू. ३ सय ३२ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई महँगिएमा रू. ३ सय ६५ मा प्रतिरोध र सस्तिएमा रू. ३ सय ७ मा टेवा पाउन सक्छ ।
२५ पुष २०७५, बुधबार ०७:४७
एनएमबी बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, १३ मङ्सिर २०७५)
१३ मंसिर २०७५, बिहीबार ०९:१५
एनएमबि बैङ्कको ३० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
६ मंसिर २०७५, बिहीबार १२:३०
एनएमबि बैङ्कको बोनस शेयर शेयरधनीको हितग्राही खातामा
३ मंसिर २०७५, सोमबार ११:३५